Maitiro Ekumisa Mbavha kubva mukuba Zvako Zvemukati
China, July 8, 2010 Chishanu, June 15, 2018 Douglas Karr
Pakutanga svondo rino, vamwe venyu makaona kuti ndakatevera blogger uyo aiba zvemukati kubva Martech Zone. Dzimwe nguva, izvi zvinoitika sekuti mumwe munhu anofara uye osarudza kuti vari kundiitira tsitsi nekuwedzera vateereri vangu. Kwete. Joker iyi yakatoburitsa zvakatumirwa kune yechitatu-bato saiti ine zita rake semunyori. Hazvigamuchirwe.
Muchinda uyu akatumira zvakabiwa pablog rake blog. Izvo zvaive zvisina kungwara, nekuti Blogger inoenderana neDigital Millenium Copyright Act (DMCA) manotsi ekutora pasi. Ini ndazadza fomu reBlogger uye ndagamuchira chiziviso nhasi kuti vabvisa izvo zvakabiwa.
Ndiri kuonga kwazvo rutsigiro rweBlogger pane izvi!
Maitiro Ekugadzirira Kugadzirira Zvemukati Zvako Kubiwa
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti ini nemaune ndinosiya nzira yechingwa mune yangu blog zvinyorwa. Kazhinji kacho mbavha idzi dzinonyorazve kana kuteedzera zvirimo nekuzvinamatira. Panzvimbo iyoyo, ivo vanonyora algorithms uye vanobata yako RSS feed uye vobva vangosundidzira kunze kwavo blog. Kazhinji yenguva ino inoitika, blogger haizive. Ndiri. Chimwe chezvikonzero ndakagadzira iyo PostPost plugin yaive kuitira kuti ndikwanise kugadzirisa nekuwedzera zvemukati petsoka dzangu. Yese posvo pane yangu RSS feed ine imwe mhando yekubatanidza kudzokera kublog rangu.
Tevere, ini ndakamisa Google Alerts nedomain yangu sezwi rekutsvaga (pamwe nevamwewo vandisingakwanise kukuudza nezvazvo). Iye zvino - nguva yega yega munhu paanobatana neblog rangu, ini ndinowana yambiro yeemail nechunk yechinhu Izvo zvinoonekwa ipapo pandinoverenga zvemukati mangu mumuviri weyevero.
Zvichida chimwe chezvinhu zvekunyepedzera zvandinoita ndechekuti ini pakarepo ndinotenga mifananidzo kubva kuStockPhoto kune ese ezvangu zvinyorwa zvevhiki rinotevera kana zvakadaro. Sezvo ini ndichibhadhara iwo mafoto, zviri pamutemo kwandiri kuti ndiashandise asi hapana mumwe munhu. Kana iwe uri benzi zvakakwana kuti ubabe zvemukati mangu, iwe urikuda kunge uri kutsikisa iyi yakatengwa mifananidzo zvakare. Iye zvino ndine kambani hombe hellbent pakurwisa kubirwa kwemvumo padivi rangu. Pangosvika pandinoona zvakatumirwa zvakaburitswa, ndinosangana nerutsigiro kuburikidza iStockPhoto uye mhan'arira imwe neimwe yezvinyorwa, mifananidzo, kwainobva uye kuti zvakabiwa.
Kutaura chokwadi, handina chokwadi kana iStockPhoto yakateedzera chero nyaya… dzese dzakaburitsa zvakatumirwa pandakavawana ndikavaudza. Pachine chimwe chinwiwa chisina kana mhosva mukati maro kwandiri, zvakadaro. Ini handidi kuve parutivi rwusiri rweyuniti sutu neStockPhoto. Ivo vane homwe dzakadzika uye akawanda magweta.
Udza Shamwari dzavo
Handina kunyarara nezvazvo. Ndinoita a Whois.net kutarisa kuti uone iyo inobata kambani uye munhu muridzi wesaiti. Ini ndichaedza kubata munhu wacho pakutanga pakutanga. Ipapo maemail anoenda kukambani inobata, maTweets anoshatirwa, uye Facebook Wall mameseji anotumirwa. Ini handisi kuzomira kusvikira ndatanga kuwana mhinduro kumashure.
Sezvandambotaura kare, handina kumbobvira ndapfuura iyi poindi. Kune nguva dzose mukana wekuti mumwe munhu abire zvandinoda uye ave kumahombekombe, akavanzwa, uye zvisingaite kudzingirira. Ndichaita nepandinogona napo kuti ndivaudze kune injini dzekutsvaga panguva iyoyo, asi HANDIZOVABvumira kuti vaende nazvo. Iwe haufanire kana!
SaaS Pfungwa Mhinduro: Inogadziriswa uye Octiv
Jul 9, 2010 pa 8: 12 AM
Asi ini ndanga ndichinetseka kana iwe uchikwanisa kundipa rimwe zano pane inonyengera asi yakafanana mamiriro.
Ngatitii vanhu vari kutumira mifananidzo yenyu uye mapikicha emifananidzo yenyu pabhodhi remifananidzo risingazivikanwe (verenga: 4chan.org), iro rinozivikanwa nekusaita hany'a nechero chinhu. Ndingaite sei kuti zvinhu izvozvo zvibviswe kana ndisingazive kuti ndiani ari kuzvitumira?
Jul 9, 2010 pa 9: 20 AM
Iwe unogona kuita zvinhu zviviri:
1) Watermark mifananidzo yako. Isa chinyorwa pavari chinoti kambani yako kana zita rewebhusaiti. Tarisa kune masaiti akaita seStockphoto uye iwe uchaona izvi.
2) Zvakajeka mumitemo ye4chan kuti kukanganisa kuchabatwa zvakanyanya. Ndaivabata nepagedhe ravo http://www.4chan.org/contact - kana vakasapindura, vatumire mameseji kuburikidza ne Twitter kana kupi zvako kwaunogona.
3) Yekupedzisira gomba kuedza: Unogona kuvaendesa. Kunyanya kana saiti yacho isiri yekune dzimwe nyika uye varidzi vayo vachizivikanwa, enda shure kwavo.
Jul 9, 2010 pa 9: 29 AM
Izvi zvaizowira muchikamu che "Chenjerera Doug".